संकटमा प्रेम जोडी : भिलेन बन्दै अभिभावक र प्रहरी : प्रेम गर्दा यहा सम्मको अत्याचार किन ? - Saptakoshionline
संकटमा प्रेम जोडी : भिलेन बन्दै अभिभावक र प्रहरी : प्रेम गर्दा यहा सम्मको अत्याचार किन ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २८, २०७५ समय: ३:४५:४७
इटहरी / भनिन्छ सन्तानको प्रत्येक सफलतामा आफ्नो आमा बाबुको ठुलो हात हुन्छ । सन्तान सुखिहुनु त्यसमा त झनै अभिभावकको ठुलो भुमिका रहन्छ । आफ्नो सन्तानको प्रत्येक इच्छा तथा खुशीहरू पुरा गर्नु आमाबाबुकोलागि जिम्मेवारी पनि मानिन्छ सन्तान खुशी भएमा आमाबाबु त्यसै खुशी हुन्छन र आमाबाबुको सपना पुरा गर्नु प्रत्येक सन्तानको कर्तब्य पनि हो ।तर कतिपय सन्तानको यस्ता खुशी हुन्छन जुन अभिभावक तगारो बनेर खडा भइदिन्छन र ति सन्तानले अन्त्यमा आत्महत्यालाई बिकल्प बनाइदिन्छन । यस्ता उदहारण हाम्रो समाजमा प्रसस्तै देखिएका छन ।
घटना नं एक – सुनसरी इटहरी उपमहानगर २ शान्तिनगरकि उर्मिला पुरी र सोहि स्थानका गणेश मगरबिच प्रेम बिवाह भयो । गाउ घरमा सम्बन्धलाृइ सहजै नस्विकार्ने थहा पाएपछि उनिहरू गत ७४ फागुनमा भागेर बिवाह गरे तर त्यसको केहि दिनमा केटि पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालयमा केटापक्ष बिरूद्ध उजुरी गरेपछि प्रहरीले काठमाण्डौ गोंगबुबाट दुवैलाई पक्राउ गरी घर ल्याएर आफन्तको जिम्मा लगाए । त्यसकै भोलि पल्ट केटिले बिष सेवन गरेर आत्महत्या गर्न खोजेपछि दुवै परिवारको सहमतिमा केटा र केटिको बिवाह गरिदिए । अहिले शान्तिनगरका मगर परिवारमा खुशी देख्न सकिन्छ ।
घटना नं २ – सुनसरी इटहरी हटीया लाइनकै उमा श्रेस्ठ एसएलसी सकिए लगत्तै इटहरी बालग्रामका मनिस यादव संग भागेर बिवाह गरे । उपल्लो जात संग छोरी गएको भन्दै केटि पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा अपहरण तथा जबरजस्ति करणीको मुद्धा दर्ता गरिदिए । इटहरीकै आफन्तकहा लुकेर बसेको अवस्थामा प्रहरीले केटा र केटि दुवैलाई नियन्त्रणमा लियो । केटिले यादवले आफुमाथि कुनै जबरजस्ति नगरेको र आफै स्वइच्छाले उसंग बिवाह गरेको र उ बिना आफू बाच्न नसक्ने प्रहरी समक्ष बयान दिएपछि केटिपक्षले हालेको उजुरी फिर्ता भयो । अन्तत केटिको उमेर १८ मात्र पुगेको र आउदो २ बर्षमा दुवैको बिवाह गरिदिने सर्तमा आ आफ्नो घर फिर्ता लगियो ।
घटना न ं ३ – सुनसरी देवानगञ्जका भगिरथ मेहताले सोही गाउकी २३ बर्षिया मेहता थरकै युवति संग ४ महिना अघि भागेर प्रेम बिवाह गरे बिवाह गरेको खबर घरमा गर्दा कुनै हालतमा बुहारी नस्विकार्ने अभिभावकले बताएपछि उनिहरू भारतको फारविसगञ्जमा गएर बसे । एक साता पछि केटाको परिवारले ललाई फकाई माया जालमा पारेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि दुवैजनलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी ल्याइयो । केटा र केटि दुवैले एक अर्का बिना बाच्न नसक्ने प्रहरी संग बयान दिएपछि प्रहरीमा परेको उजुरी बदर भयो अहिले दुवैजना इनरूवा बसपार्क आसपास एक स्थानीयको घरमा डेरा गरेर गुजारा चलाउदै आएका छन ।
यि माथिका समाजमा देखिएका साना तिना उदहारण मात्रै हुन । जो प्रेम गरेकै भरमा झुटो आरोप सहन बाध्य छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा हेर्ने र बुझ्ने मात्र हो भने दैनिक यस्ता घटनाहरू छलफलकालागि लाइनमा बसेका हुनछन ।गएको आर्थिक बर्ष २०७४ ।७५लाृइए हेर्ने हो भने जिल्लामा जवरजस्ती करणी उद्योगमा ३६ र अपहरणमा ७ वटा र हत्या २ वटा घटना दर्ता भएका छन तर त्यो भन्दा दुई गुणा बढी प्रेम बिवाहका मुद्धा रहेका छन जुन कुनै दर्ता छन त कुनै छलफल गर्दै मिलाइएका छन । धेरै जसो मुद्धा छलफलबाटै मिलाइने गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी अन्तरगत महिला सेलकि प्रमुख बिनु बस्नेतले बताए अनुसार जिल्लामा प्रेम बिवाहका घटनाहरू अहिले दैनिक जसो अपराध बन्दै प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको छ । जसले प्रेम भन्ने बिषलाई नकरात्मक रूपमा लिन थालिएको छ । यस्ता घटना बिशेष गरी सुगम जिल्लामा भन्दा सुगम जिल्लाकै दुर्गम गाउहरूमा बढी देखिएको महिला सेलकि प्रमुख बस्नेतले बताइन । उनले केटा र केटि बिच भएको प्रेम बिवाहलाई अन्त्यमा अभिभावकले सहजै स्विकार्न नसक्दा अन्तत अपहरण तथा जबरजस्ति करणीका निवेदन दिन आउनेहरूको लर्काे लाग्ने गरेको तितो यथार्थ सुनाइन ।
प्रेम विवाह गरेपनि उमेर नपुगेकाहरुको हकमा भने मुद्दा चलाउने गरेको महिला सेलकि प्रमुख बिनु बस्नेतले बताइन । यता प्रेम गरेकै भरमा झुटो आरोप लगाएर बिभिन्न मानसिक याताना दिनु समाजकालागि आफै घातक रहेको मानवअधिकारकर्मिहरू बताउछन ।
मानव अधिकारकर्मि रमेस भट्टराईका अनुसार सुनसरीमा यस्ता घटना अलसअलि सुन्ने गरेको तर प्रेम गरेकै भरमा झुटो आरोप लगाएर यातना दिनु गलत प्रवृति रहेको र यसको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यता माया र प्रेम जस्तो पवित्र बन्धनलाई बिभिन्न आरोप लगाउदै जेल हाल्ने हो भने एक दिन संसारबाट प्रेम हराएर जाने निश्चित रहेको सुनसरीका बुद्धिजिवि तथा सर्जकहरू बताउछन ।